POOL LEHIBE, Mamolavola, manamboatra ary mamatsy fitaovana sy rafitra avo lenta izahay ho an'ny FITSARANA RANO ny dobo filomanosana ara-barotra, andrim-panjakana ary toeram-pamokarana rano sy rano.
Manana traikefa 25 taona izahay amin'ny famokarana fitaovana fanadiovana rano. Ny orinasanay any Shina dia nifantoka tamin'ny fivoaran'ny teknolojia avo lenta, mitsitsy angovo, manara-maso ny tontolo iainana ary vokatra fitsaboana rano tsy misy vidiny.
Ny orinasa anatiny dia ahitana fitaovana fanivanana mivezivezy amin'ny rano, fitaovana famonoana otrikaretina, fitaovana fanamainana sy hafanana tsy tapaka, fitaovana spa ary sampana hafa. Ny vokatra fanohanana novokarin'ireo sampana ireo dia aterina any amin'ny toerana misy ny tetikasa mifanaraka amin'ny filan'ny tetikasa, ary apetraka sy amboarina eo ambany fitarihan'ny ekipa matihanina.
Rafitra fikarakarana rano ho an'ny dobo filomanosana, Spa, Toeram-pamokarana rano ary valan-drano
Rafitra fikorianan'ny rano dobo
Ny paompy dobo filomanosana no fototry ny rafitra fitsaboana rano dobo filomanosana.
Ny rano dia mivoaka avy ao amin'ny dobo, mandalo amin'ny filtration sy ny rafitra fitsaboana simika, ary avy eo dia miverina hatrany amin'ny dobo mba hahazoana antoka fa tsy misy loto, potipoti-javatra ary bakteria ao anaty dobo.
Ny paompy dobo lehibe dia mety amin'ny dobo filomanosana amin'ny habeny sy ny karazany rehetra, manomboka amin'ny dobo filomanosana kely tsy miankina ka hatramin'ny dobo filomanosana lehibe indrindra olympika.
Mitadiava bebe kokoa momba ny rafitra Circulation an'ny GREATPOOL amin'ny fikarakarana rano dobo
rafitra fanivanana dobo
Ny rafitra fanivanana voalamina tsara dia hanampy amin'ny fiantohana ny rano madio ho an'ny dobo filomanosanao.
Ny sivana dobo filomanosana GREAT POOL dia natao hanadiovana ny loto sy ny potipoti-javatra kely hafa ao anaty rano, ary afaka manampy amin'ny fampihenana ny fitomboan'ny bakteria sy ny ahidrano ihany koa.
GREAT POOL no mpitarika an'izao tontolo izao amin'ny teknolojia sivana mandroso ary manana sivana dobo filomanosana midadasika indrindra; avy amin'ny sivana cartridge tsotra mankany amin'ny sivana fasika sy diatomaceous earth (DE).
Fantaro bebe kokoa momba ny rafitra fanivanana an'ny GREATPOOL ho an'ny fikarakarana rano dobo
Rafitra famonoana otrikaretina rano
Ampiasaina ny otrikaretina mba hamonoana ny zavamiaina bitika sisa ao anaty rano; ampahany manan-danja amin'ny fizotran'ny fikarakarana rano izy io satria maro ny bakteria mety hanimba ny fahasalaman'ny olombelona.
Famonoana chlorine sy bromine
Ny tena malaza sy mahazatra vahaolana ho an`ny disinfection ny rano dobo filomanosana. Ny chlorine sy ny bromine dia tena mandaitra amin'ny famonoana microorganisms, saingy mila fehezina tsara izy ireo. Ny rafitra fitsaboana chlorine GREAT POOL rehetra dia natao mora ampiasaina sy azo antoka ho an'ny mpampiasa dobo.
Ozone famonoana otrikaretina
Izany no teknika malaza indrindra, indrindra amin'ny dobo filomanosana. Ozone dia mampiasa atôma oksizenina handrava ny zavamiaina bitika amin'ny alàlan'ny oksida. Raha ampitahaina amin'ny rafitra famonoana otrikaretina mifototra amin'ny chlorine sy bromine, dia manana tombony maro ny ozone. Ny Ozone dia tsy vitan'ny hoe manadio ny rano, fa manala ny sisa tavela amin'ny rano dobo. Mety hiteraka fikorontanana ao anaty rano ireo tavela simika ireo, hamokatra fofona simika, ary hanorisory ny hoditra sy ny maso.
Amin'ny fampiasana ny halavan'ny taratra ultraviolet, ny bakteria dia tsy mihetsika ary lasa tsy mampidi-doza. Ity karazana teknolojia ity dia manana tombony maro amin'ny rafitra ozone, saingy tsy mitaky fanaraha-maso ny fatra satria tsy misy akora simika.
Fantaro bebe kokoa momba ny rafitra famonoana otrikaretina GREATPOOL amin'ny fikarakarana rano
Mitadiava bebe kokoa momba ny rafitra fanamainana sy fanalana hamandoana an'ny GREATPOOL ho an'ny fikarakarana rano dobo
Fanafanana sy Dehumidification Systems
Ny tanjonay dia ny hanome ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fanamainana sy ny dehumidification ho an'ny dobo filomanosanao sy ny fomba fampiasanao azy
Amin'ny maha mpanamboatra azy, GREAT POOL dia mirehareha fa afaka manome vahaolana isan-karazany amin'ny fisafidiananao ny fomba hanafanana ny dobo filomanosana.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny fanafanana dobo filomanosana avy amin'ny masoandro dia ny fampiasana ny angovo maimaim-poana avy amin'ny masoandro mba hanafana ny rano mivezivezy sy hamerina izany ao amin'ny dobo filomanosana amin'ny mari-pana ambony.
Ny fanafanana dobo filomanosana elektrika, fantatra ihany koa amin'ny hoe paompy hafanana, dia miasa amin'ny alalan'ny fitondrana rano ao anaty siny fanafanana ary avy eo manompa rano mafana miverina any amin'ny dobo filomanosana. Ny fifanakalozana hafanana sy ny hatsiaka tsy tapaka dia mitazona ny dobo filomanosanao mafana. Misy karazany roa ny fanafanana herinaratra; loharanon-drano sy loharanon-drivotra. Na dia miasa mitovy aza ireo roa ireo, ny fanafanana loharanon-drano dia mamindra hafanana avy amin'ny loharanon-drano mankany amin'ny rano dobo filomanosanao, raha mampiasa hafanana avy amin'ny rivotra kosa ny fanafanana loharanon-drivotra.
Ny paompy hafanana dia miha-malaza noho ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana ambany sy ny fahombiazan'ny angovo avo lenta. Afaka miasa amin'ny toerana tsy mety amin'ny fanafanana rano amin'ny herin'ny masoandro ny paompy rano
Sauna sy SPA rafitra
Ny etona sy ny sauna dia tsara ho an'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina.
Avelao ny GREATPOOL manamboatra na manamboatra ny rafitra efitrano sauna araka ny tetikasanao no mety ho safidy tsara indrindra. Samy manome flexibility lehibe sy fametrahana mora.
Fantaro bebe kokoa momba ny fitaovana Sauna sy SPA an'ny GREATPOOL
Ireo rafitra vaovao sy voalamina tsara ireo dia manome fahafahana milalao mampientam-po sy misaina ho an'ny rehetra, na ankizy na olon-dehibe, hifanerasera amin'ny rano. GREAT POOL dia mamolavola sy mamatsy vahaolana amin'ny valan-drano mahagaga araka izay ilainao.
Fantaro bebe kokoa momba ny vahaolana Waterpark an'ny GREATPOOL
Ny fitaovana sy rafitra dobo filomanosana novokarina sy nomen'ny GREATPOOL dia amidy eran-tany amin'ny alàlan'ny tambajotran'ny masoivoho, mpanamboatra, mpaninjara ary mpandraharaha matihanina. Mifidy sy mametraka tsara ny vokatra, ny fitaovana ary ny rafitray izy ireo. Ny tanjonay dia ny hampahomby ny vokatray any amin'ny dobo filomanosana, spa sy toeram-pamokarana rano, na fanorenana vaovao izany, na fanavaozana na fandidiana.
Raha toa ianao ka mandray anjara mavitrika amin'ny fandrindrana ny dobo filomanosana, ny famolavolana, ny fanorenana na ny fampandehanana, ary te hanampy amin'ny fampiharana ny vokatra sy ny teknolojia amin'ny fitaovana ao amin'ny faritra misy anao, dia mifandraisa aminay avy hatrany.
Avelao izahay hanampy ny fanamboarana ny fitaovan'ny dobo!
Dobo filomanosana Infinity Edge, Serivisy dobo filomanosana, Vahaolana amin'ny dobo filomanosana ivelany, Vahaolana amin'ny dobo filomanosana ho an'ny daholobe, Company Pool, Tetikasa dobo filomanosana,